Ruushka oo sheegay in ay sii xumaan karto xaaladda Afghanistan | Star FM
Home Caalamka Ruushka oo sheegay in ay sii xumaan karto xaaladda Afghanistan
Ruushka oo sheegay in ay sii xumaan karto xaaladda Afghanistan
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergei Lavrov ayaa maanta walaac ka muujiyay xaaladda wadanka Afghanistan oo uu sheegay in ay sii xumaan karto.
Waxaa uu xusay in hadii ay dantu keento xukuumadda Moscow ay diyaar u tahay inay difaacdo saaxiibadeeda gobolka.
Dhanka kale isniintii ayay ahayd markii Emomali Rakhmon oo ah madaxweynaha wadanka Tajikistan uu amar ku bixiyay in la abaabulo 20,000 sarkaal si ay u adkeeyaan xadka dalkaasi kala dhexeya Afghanistan.
Tani ayaa timid ka dib markii la soo tabiyay in ugu yaraan 1,000 ka mid ah ciidamada Afghanistan ay gudbeen xadka markii ay kooxda Taalibaan sare u qaaday dhaqdhaqaaqyadeeda.
Previous articleDHAGEYSO:Eedeysane loo haysto xatooyada carruurta oo lagu xiray Kilifi
Next articleDHAGEYSO:Maxkamadda sare ee Soomaaliland oo soo gabagabaysay dacwado doorashada laga dudbiyay